oxytetracycline injection 20% - China Chongqing Fangtong
Raw Ihe Production
Ntụ ntụ maka Ọgwụ
WSP / Premix / Uto akwalite
Bolus / Mbadamba
kwụsie ike Study
Ivermectin ede 0,2%
Mejupụtara 5% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 50 mg. 10% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 100 mg. 13% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 130 mg. 20% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 200 mg. 30% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 300 mg. Nkowa Fangtongoxy bụ a dịgasị iche iche bacteriostatic ude. Ọ na-eme na gram-nti na-gram-adịghị mma Micro-ntule. Ọ bụ karịsịa mwute ka streptococci, clostridia, E.coli, shigellae, brucellae, salmonellae, leptospirae. Wdg addit ...
5% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 50 mg.
10% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 100 mg.
13% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 130 mg.
20% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 200 mg.
30% onye ọ bụla ml nwere Oxytetracycline 300 mg.
Fangtongoxy bụ a dịgasị iche iche bacteriostatic ude. Ọ na-eme na gram-nti na-gram-adịghị mma Micro-ntule. Ọ bụ karịsịa mwute ka streptococci, clostridia, E.coli, shigellae, brucellae, salmonellae, leptospirae. Wdg Ke adianade do, ọ bụ irè megide ụfọdụ mycoplasmas, rickettsiae, chlamydiae, ụfọdụ mmadụ nje na nnukwu nje.
Mgbe ochichi nke ọgwụgwọ dose of Fangtongoxy 5%, a elu larịị nke Oxytetracycline na ọbara a na-enweta n'ime ọkara otu awa na 4 awa.
Ọgwụgwọ nke ọrịa ndị Oxtetracycline-susceptible ntule na ehi, atụrụ na ewu. Diseases tinyere oyi baa na mbupu fever mgbagwoju jikọtara Pasteurella spp na Haemophilus spp, na-efe efe Bovine kerato-conjunctivitis (pinkeye) kpatara Moraxella bovis, ụkwụ ire ere ma na diphtheria mere site Fusobacterium necrophorum, nje enteritis (scours) kpatara Escherichia coli, osisi ire mere site Actinobacillus lignierisii; leptospirosis mere site Leptospira pomoma; emerụ na-efe efe na nnukwu metritis kpatara ụdị staphylocci na streptococci ntule chebaara Oxytetracycline.
N'ihi na anu-ulo: Bronchopneumonia na ndị ọzọ na akụkụ okuku ume na-efe efe, na-efe efe nke eriri afọ tract, metritis, mastitis, septicemia, puerperal-efe efe, na nke sekọndrị bacterrial na-efe efe bụ isi mere site na nje virus, etc
N'ihi na aturu na ewu:-efe efe nke akụkụ okuku ume na, urogenital, eriri afọ tract na n'ụkwụ, mastitis, nje ọnyá, etc
Pharmacological edinam: N / A
Ojiji na ochichi
Dọọ site intramuscular ogwu ogbugba. The dose nke nọ n'ọrụ ụkpụrụ Oxytetracy-Cline ichekwa 10 mg / n'arọ bodyweight nke anụmanụ. Dọọ 3 - 5 ụbọchị dabere na ụdị na ogo nke ọrịa. Ndị nlekọta a rụrụ na-esonụ olu:
Ehi 2ml / 10 n'arọ bodyweight
Atụrụ na Ewu 2ml / 10 n'arọ bodyweight
Ezi 2ml / 10 n'arọ bodyweight
Akụkụ mmetụta na contraindication
Fangtongoxy 5% na-abụghị maka nwamba, nkịta na ịnyịnya. Ọ kwesịghị nyere ụmụ anụmanụ na mbubreyo ime, ụmụ anụmanụ na oké emebi nke imeju na-na akụrụ na ụmụ anụmanụ atụchakarị ka Oxytetraycline.
Mgbe ụfọdụ, a nwa oge ọkọ na injection saịtị emee.
akpachara anya: N / A
ndọrọ ego oge
Site ikpeazụ ọgwụgwọ, n'ime ụbọchị 21 maka anụ na oriri anụ ahụ na n'ime 7 ụbọchị maka mmiri ara ehi.
Store na a jụụ na akọrọ ebe n'okpuru 25 centi-degrees, n'ebe ìhè
Previous: oxytetracycline injection 13%
Next: oxytetracycline injection 30%
Ekwentị: 0086 13908042324
The iyi egwu nke ukwu na ọnụ ọrịa N ...
Ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ ịzụlite okpomọkụ na-eguzogide ...
Researchers achọpụta ọhụrụ ehi ọrịa a ...
Ikpuchido ezì si PRRS n'oge reproduc ...